MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Emilio De Miguel Calabia as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Spain to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Emilio De Miguel Calabia as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Spain to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok.
Mr. Emilio De Miguel Calabia was born on 23 November 1965 in Madrid, Spain. He obtainedabachelor’s degree in law, and joined the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of Spain in 1990. He has served under various capacities at the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of Spain, Spanish Embassies in Cameroon, Bolivia, Thailand and Singapore as well as at Spanish Consulate General in the Philippines. Mr. Emilio De Miguel Calabia is currently serving as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Kingdom of Spain to the Kingdom of Thailand.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် Mr. Emilio De Miguel Calabia အား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော စပိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
Mr. Emilio De Miguel Calabia ကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဥပဒေဘာသာရပ်ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် စပိန်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် စပိန်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၊ ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ရှိ စပိန်သံရုံးများနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ စပိန်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၌ ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် Mr. Emilio De Miguel Calabia သည် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ စပိန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၄ ရက်